Maldive နိုင်ငံသီးသန့် အထူးခရီးစဉ် - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 337 view counts
Brand : GREAT STAR LIGHT
Model : Maldive နိုင်ငံသီးသန့် အထူးခရီးစဉ်
လုပျငနျးအမညျ : GREAT STAR LIGHT Travels & Tours Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : +95-1-512314, +95-9-73205984, +95-9-250270670
နေရာ : Maldiveနိုင်ငံ
Maldiveနိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ပြာပြာ ကမ်းရိုးတန်းအလှများမှာ ခရီးသွားများအတွက် အပန်းဖြေရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြည်လင်လှသော ပင်လယ်ရေပြင်ကြောင့် ပင်လယ်အတွင်း သဘာဝအလှတရားကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမှာ အလှဆုံးကန်ရိုးတန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်များအား လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက GREAT STAR LIGHT Travels & Tours Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Great Star Light Travels & Tours is one of the well established Travels & Tours Company which can also be reliable with traveling products. It is operating Outbound and Inbound Tourism since 2014 under the Ministry of Hotels and Tourism in Myanmar. The staffs are kind, friendly and professional ones who are also providing the tour packages all over the world.
FIT\_GIT Tour Packages (Specialized in Myanmar, Tapan, Thailand, Singapore, Kprea, Bali, Maldives)
တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း (သို့) မိသားစုလိုက်၊ သီးသန့်လည်ပတ်ချင်သော ခရီးစဉ်များကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ အထူးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မ်ိမိသိလိုသမျှကို အချိန်မရွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပဟန်နီးမွန်း ခရီးစဉ်များကို အထူးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
GREAT STAR LIGHT Travels & Tours မြန်မာပြည်အနှံ့ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
For Maldive နိုင်ငံသီးသန့် အထူးခရီးစဉ်
May I get the quotation for "Maldive နိုင်ငံသီးသန့် အထူးခရီးစဉ်" ?